Ndeipi mhedzisiro yechivi ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Ndeipi mhedzisiro yechivi
Ndeipi mhedzisiro yechivi. Mwari akasika nyika yakakwana kuti vanhu vafarire. Zvisinei, sarudzo yaAdhamu yekusateerera Mwari yakatitungamira kuti titambure mibairo yechivi.
Mhedzisiro inounzwa nechivi ndeiyi: kunzwa kwekuzvipa mhosva, kutya, kusurukirwa, kukuvadzwa, kurwadziwa, kutyoka, kudzikisira, kurwara, uye nekuparadzwa zvinokonzerwa nekutyora mitemo yaMwari. Dzimwe nguva tinotadza nechikonzero, dzimwe nguva tinotadza tisinganzwisise mhedzisiro yacho. Nekudaro, isu patinogamuchira Kristu, iyi mhedzisiro haichashande uye tinonakidzwa nekusingaperi muparadhiso naMwari neMwanakomana wake.
Tevere tinotsanangura kuti mhedzisiro yechivi ndeipi kubva mumaonero ebhaibheri. Uye zvakare, isu tichatsanangura kuti zvinotibata sei.
1 Ndeipi mhedzisiro yechivi zvinoenderana nebhaibheri
2 Mhedzisiro yechivi kumutendi
Ndeipi mhedzisiro yechivi zvinoenderana nebhaibheri
Kusiyana nerimwe bhuku ripi zvaro, Bhaibheri rinozivisa kuti mhedzisiro yechivi chii uye zvinofungwa naMwari nezvazvo. Bhaibheri rinotaura kuti chivi inyaya yakakomba nekuti inotiparadzanisa naMwari. Kubva muchivi kunoguma rufu yemunhu, sezvo iyo kufa pamweya zvakakubira hupenyu husingaperi. Hazviperi mukufa panyama, asi zvinobva zvaitika Kuparadzaniswa nekusingaperi kubva kuna Mwari, kure nekuvapo kwake nekubwinya kwake nekusingaperi.
Kumurume ndokuti: Nekuti wateerera kuinzwi remukadzi wako, ukadya zvemuti wandakakuraira ndichiti: Usaudya; Nyika yatukwa nekuda kwako; uchazvidya nemarwadzo mazuva ese eupenyu hwako.
Minzwa norukato ichakuberekera, uye uchadya miriwo yomusango.
Genesi 3: 17-18
Nokuti mubairo wechivi rufu, asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu.
VaRoma 6: 23
Mhedzisiro yechivi kumutendi
La kuparación nekusingaperi yekuvapo kwaMwari ndicho chakakomba mhedzisiro yezvivi zvese. Ani naani anotadza, anopandukira Mwari. Gehena inguva isingagumi isina Mwari. Bhaibheri rinoti mimwe mhedzisiro yechivi mu nyika Ndizvo:
Chirwere: Iye zvino miviri yedu iri panjodzi dzemhando dzose dzezvirwere uye rimwe zuva isu tese tinofanira kufa (asi chenjera: chirwere hachisi chigaro chechivi chega, mugumisiro wekuvapo kwechivi munyika).
Njodzi dzinongoitika dzoga: nzara, mafashama nedzimwe njodzi ndizvo zvibereko zvekutukwa kwenyika.
Ukama hwakaoma: zvave kuoma zvakanyanya kuva nehukama hunoenderana nevamwe vanhu.
Kugadzikana: mhosva inokanganisa hupenyu pasina kupa mhinduro; munhu anozvishora, asi haazive kuti achinje sei hupenyu hwake.
Kusava nekunzwisisa: zvinopesana nemhosva; munhu anorasikirwa nepfungwa yechakanaka nechakaipa oenderera mberi nekutadza asinganzwisise mhedzisiro yacho
Kunyadziswa: zvivi zvinotungamirira kukunyadziswa kwevanozvikudza uye vanozvikudza.
Kurangwa kwemutemo: zvimwe zvivi imhosva uye zvinogona kutungamira kune akasiyana marudzi echirango anoshandiswa na Kururamisira munhu.
Chivi chinounza kutambura kwakawanda kumutadzi. Zvisinei, unofanira kunzwisisa kuti Mwari havadi kukuranga. Nekuda kweichi akatuma mwanakomana wake munyika, kuti ugone kuzvisunungura kubva kuzvivi zvako.
Mwari anotida uye haafarire kutiona tichitambura. Naizvozvo akauya panyika kuzotora kurangwa kwezvivi zvedu pachinzvimbo chedu. Zvino avo gamuchira Jesu semuponesi wako gamuchira iyo ndine urombo yezvivi zvako uye vanogona kuramba vari pamberi paMwari. Rimwe zuva Mwari vachaparadza kutambura kwakakonzerwa nechivi uye vakaponeswa vachagara naye nokusingaperi!
Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakabatsira kwauri. Kana ikozvino iwe uchida kuziva kugamuchira Jesu semuponesi, ramba uchivhura Ziva.online.
Maitiro Ekutsanya kwaDaniel
Kuziva sei kana Mwari vandiregerera